CIRRIGA SIBERIAN: DARYEELKA GURIGA, CAYAYAANKA IYO CUDURRADA - SOOSAARKA DALAGGA
Geedka quruxda badan iyo quruxda badan - Cirraafka Siberian
Siberian Cypress - Xasaasiyad aad u qurux badan, oo qurux badan.
Si aad u qadariso quruxda geedkan hooseeya, muhiim maaha inaad safar halis ah ku dhex mariso kaymaha taiga, waxaad ka iibsan kartaa dukaanka, oo ku hareereysan daryeelka iyo daryeelka lagama maarmaanka u ah dhirta.
Siberia, ama Siberian, way kulmi karaan ma aha oo keliya gobollada waqooyiga ee dalkeenna, laakiin sidoo kale Bariga Farogiga, Cawaduusta, Crimean, qaybta waqooyiga Yurub iyo Maraykanka, iyo sidoo kale bartamaha Aasiya.
Waa geedo hooseeya, caadi ahaan aan ka badneyn dhererka 1 mitir. Mahadnaq leh jilicsanaanta jilicsan iyo faafinta taajka ayaa caan u ah dhirta ornamental.
Maalmahan, daryeelka duurka uumiga ah ee curyaanka ah waxaa lagu fuliyaa guri caadi ah, oo tani lama yaabi doonto qofna.
Inkastoo 10 sano ka hor beerashada Siberian cypress ee xayndaabka daaqada u muuqatay mid aan la qiyaasi karin. Daryeelka aan qabin ee aan qabin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaaladaha dhirta-saaxiibtinimo, si loo abuuro taasi ma fududa.
Sida dabiiciga ah, geedku waa warshad waddo, sidaas darteed waxay u baahan tahay hawo nadiif ah oo joogto ah. Ma jecel yahay qalalan iyo kuleylka. Xilliga kuleylka, dhirta ayaa ka fiican in la dhigo meel qabow. Ha iloobin inaad si joogto ah u buufisid taajkii geedkii, geedka ayaa kuugu mahadcelin doona cirbadaha cagaaran ee cagaaran.
Cypress waxay u baahan tahay iftiin dhalaalaya, laakiin waqti isku mid ah si toos ah qorraxdu waa inaan loo oggolaan on geed. Inta lagu jiro xilliga kuleylka ma aad dhigi kartid dhirta meel u dhow kuleyliyaha ama kuleylka qolka. Hawada qallalan waxay dhaawici kartaa geedka.
Xasuusnow in mashruucyadu ay yihiin kuwa masiibo u ah nooc kasta oo juniper ah! Ka taxadar nalalka. In kasta oo xaqiiqda ah in cypress waa geedka iftiin-jecel, xad-dhaaf ah qorraxdu waxay u horseedi kartaa hurdi iyo hoos u dhaca taajka.
Cypress waxay dareemeysaa raaxo heerkul ah 5 ilaa 15 shahaadooyinka Heerkulka hoose ayaa ka sii dari doona xaaladda geedka, laakiin heerkulka sare iyo cimilada gudaha ee qallalan ayaa noqon karta mid halis ah.
Waraabinta Dhirta waxay kuxirantahay hab nololeedkeeda. Haddii cirku ku kora gudaha gudaha, markaa waa in la waraabiyaa inta badan haddii dhirta ay jidka ku jirtay. Inta lagu jiro xilliga qaboobaha meel qoyan qabow waxaa lagula talinayaa in la waraabiyo toddobaadkii hal mar. Waxaa muhiim ah in aanad beeraha biyo ku daadin, laakiin waraabinta waa inay noqotaa mid joogto ah. Waxaad diiradda saari kartaa gobolka carrada dheriga, waa in mar walba qoyan yahay.
Ciid Xajmiga, waxaa la doorbidaa in uu noqdo waxoogaa acidic ah oo leh heerka pH ee 5.5 ilaa 6.5. Waxaad ka heli kartaa oo aad ka iibsan kartaa ciidda diyaarka ah ee loogu talagalay junipers iyo qoryaha.
Ha iloobin in qoryaha, sida geedka, waxay ubaahan tahay quudin xilliyeed. Waqtiga ugu wanaagsan ee tani waa mudo kulul oo sanadka ah, taas oo ku xiran gobolka, waxay dhacdaa guga dambe iyo xagaaga. Bacriminta macdanta caadiga ah waxay si fiican u shaqeeyaan dharka ugu sareeya. Laakiin haddii aad rabto, waxaad ka heli kartaa Bacriminta dukaamada dukaanka si gaar ah loogu talagalay junipers iyo qoryaha.
Cypress Uma baahnid inaad si joogta ah isu bedeshoWaxaa lagula talinayaa inaad tan sameyso wax ka badan hal mar labadii sanaba mar. Marka beerto waa in aaney aad u qoto dheereynin jiritaanka baadiyaha. Diyaari ciidda horay u sii, oo ka dhigaysa mid dabacsan oo jajaban.
Haddii aad ka fekereyso taranta Qoryaha guriga, waa inaad u diyaargaroobtaa xaqiiqda ah in tani aysan ahayn wax sahlan. Waxaad isku dayi kartaa inaad dacaayad geedka leh gooyn gooyey manjooyin. Ka dib jarida, gooyn ayaa rujin qolka si gaar ah loo diyaariyey oo leh heer sare oo qoyaan ah. Natiijada ugu fiican, waa inaad isticmaashaa bacriminta tayo sare leh iyo bacriminta.
Kala saarista deegaan dabiici ah ayaa dhacda sanadka labaad ee dhirta. On laamaha u bislaadaan qaylo-loo yaqaan. Mid kasta wuxuu ka kooban yahay saddex abuur.
Iyadoo aan loo eegin kartida karti-soo-saarka, "ubax" jiritaanka geedi-socodka ayaa dhacda sannad kasta.
Si loo qurxiyo indhaha, waa in waqtigii loogu talagalay oo si wanaagsan loo gooyay laamood qalalan. Xasuuso in laan qallalan oo aan la jarin, waa in si buuxda looga saaraa. Iyadoo ku xiran natiijada la rabo, taajkii geedka ayaa la siin karaa qaab kasta.
Xajinta waa xannaano muhiim ah. Cudurrada ugu caansan ee cypress waa xididka kalluunka.
Tani waxay dhacdaa sababtoo ah waraabinta aan habooneyn ama ciidda aan habooneyn ee geedka.
Si aad u badbaadiso dhirta, waxaad u baahan tahay inaad ka soo saarto ciidda, gooyaa xididdada buka iyo kudheer si qalalan qalalan. Ka dib markaa waa inaad sameysid nidaam waraabineed oo dhexdhexaad ah.
Cayayaanka ee cayayaanka ee ugu khatarsan gariir iyo caarada caarada. Haddii aad ka hesho caleemo huruud ah ama bunni ah caleemaha, markaa waxaad la tacaalaysaa gaashaan.
Caarada caarada ayaa muujinaysa, lafdhabarka laanta geedka leh webka caarada. Geedku si tartiib ah ayuu u engegaa oo hoos u dhacaa.
Daweeyo dhirtu waxay noqon kartaa caawimo cayayaanka ama tincture ee basasha.
Cypress ayaa ku dari doona oo kaliya gudaha gudaha raaxada guriga iyo quruxda, laakiin sidoo kale samee nadiifiyaha hawada gudaha iyo caafimaadka badan. Warshad Tani waxaa sidoo kale lagu talinayaa dadka u nugul cudurada habka neefsiga.
Intaa waxaa dheer, dhagxaantu way awoodi karaan inay bixiyaan saameynta jeermiska cudurada viral, oo ay ku jiraan bakteeriyada tubercle ama bakteeriyada staphylococcus.
Saliidaha muhiimka ahqarsoodi dhirta, waxay saameyn ku yeelan kartaa nidaamka dareenka aadanaha. Daawada dadweynaha, juniper waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada kala duwan, oo ay ka mid yihiin cudurrada neefsashada, laabotooyinka iyo si loo wanaajiyo caafimaadka guud.
Cypress waa faa'iido maaha oo keliya caafimaadka aadanaha, warshadani waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin wax soo saar.
Waxaan kugula talineynaa in aan akhrino maqaalkeena ku saabsan noocyada kale ee cawska, taas oo ah: iyada oo la geliyo tikidhada dahabka iyo Goldcrest Wilma.
Kobaca iyo xanaaneynta dhirta guriga maaha mid fudud sida ay u muuqan karto qof kale. Si aad ugu raaxaysatid beertaada gaarka ah kuma filna inaad ku qaadato wakhti gaar ah.
Warshadu waa noolaan nool, baahida daryeel, daryeel taxaddar leh iyo xaalado nololeed oo raaxo leh.